août 2021 - FJKM Amparibe Famonjena
Alahady 30 aogositra 2021
Alahady fahadimy natokana ho an’ny Akany Fialofana eny Tangaina
« Tiava ny fahavalonareo, manaova soa amin’ny mankahala anareo »
Ny fanompoam-pivavahana mivantana, notanterahina teto amin’ny Fitandremana F.J.K.M. Amparibe Famonjena tamin’ny 9 ora maraina, izay notarihan’ny diakona avy ao amin’ny Vaomieran’ny Aim-panahy, no taterina amintsika mpianakavin’ny finoana. Rakotonirina Tsiry no nitarika. Ny Mpitandrina Ramilison Diamondra no nitondra ny Tenin’Andriamanitra.
Ny Lioka 6 : « 27- 36 » no andin-tSoratra Masina nangalana ny hafatry ny Tompo. Ny litorjia amin’ny endriny fahatelo no narahina.
Nitondra am-bavaka ny teny hovakiana Ramahaleo Muriel, ary namaky ny Soratra Masina, Ramahaleo Zo.
Ranivoson Toky no nampianatra ny hira fanevan’ny faha 160 taonan’ny Fiangonana, mialoha ny fanompoam-pivavahana. Nisy ny feon-javamaneno nandritra ny fidiran’ny mpitarika sy ny diakona.
Niarahana niredona ny hira fanevan’ny 160 taona, mialoha ny famakiana ny andin-tSoratra Masina tao amin’ny Salamo 26 :1-7 « Tsarao aho, Jehovah o, fa mandeha amin’ny fahamarinako aho. Ary Jehovah no itokiako, ka tsy miahanahana aho. Diniho aho, Jehovah o, ka fantaro. Izahao toetra ny voako sy ny foko. Fa ny famindramponao no eo anoloan’ny masoko. Ary mandeha amin’ny fahamarinanao aho. Tsy mba miara-mipetraka amin’ny olon-dratsy aho. Na manan-draharaha amin’ny olom-petsy. Halako ny fiangonan’ny mpanao ratsy. Ary tsy miara-mipetraka amin’ny ratsy fanahy aho. Manasa ny tanako noho ny fahamarinako aho. Ka te-hitoetra eo akaikin’ny alitaranao, Jehovah o, mba hanao feo fiderana ka hilaza ny asanao mahagaga rehetra ».
Nohiraina ny FFPM 14 :1, 2,3 « O ! Ry tany rehetra, avia izao ». Nisy ny vavaka fiderana sy feon-javamaneno fohy.
Zoky Rakotoarisoa Tanteraka, mpampianatra K1, no nitondra ny hafatra fohy ho an’ny fianakaviamben’ny sampana Sekoly alahady. Ny andinin-tSoratra Masina ao amin’ny Kolosiana 4:5b « Hararaoty ny andro azo anaovantsoa »,no nandraisana izany hafatra izany.
Ohatra teo amin’ny fiainana andavanandro no narosony ho an’ny ankizy. Raha misy namana mpiara-mianatra dia afaka ampiana izy ireo. Ianareo no fitaovana entin’ny Tompo hanazava ny lesona. Raha misy akanjo, na boky na kilalao mbola tsara tsy ampiasaina na manana maromaro dia afaka zaraina amin’ny ankizy, na taomina ny ray aman-dreny hanome ny zaza kamboty ihany koa. Betsaka ny asa soa afaka atao. Raha izao mbola kely izao ny ankizy no manao izany,na lehibe aza dia afaka ataony foana izany.
Niarahan’ny fianakaviamben’ny Sekoly alahady niredona ny hira FF 16:2 « Ny mpianatry ny Tompo, asainy mifanompo ».
Mialoha ny famakiana ny Soratra Masina dia nanao ny vavaka mialoha ny vakiteny, Ramahaleo Muriel. Nanatanteraka ny vakiteny araka ny perikopa Ramahaleo Zo, izay hita ao amin’ny boky Fanekena Taloha II Samoela 9 :1-13 sy ny Filazantsara Lioka 6 :27-36 ary ny Epistily nosoratana ho an’ny Hebreo 10 :19-25. Noredonina ny hira FFPM 823 :1,2 « Hoderaina tokoa » taorian’izay.
Fampahatsiahivana ny asa tsara mifanaraka amin’ny lohahevitra fitaizam-panahy nobanjinina nandritra ny efatra alahady no nataon’ny Mpitandrina Ramilison Diamondra.
Ny finoana mihitsy no miteraka asa tsara izay mifanaraka amin’ny toetran’Andriamanitra. Misy ny toe-panahy sy toe-po entina manompo, eo ihany koa ny fahendrena, miala amin’ny lainga, manana fahatahorana an’Andriamanitra. Nitaona ho amin’ny fibebahana ny perikopa :
Manao ny sitrapon’Andriamanitra amin’ny fo manontolo ;
Fitaizana ny Fiangonana ho amin’ny famoriam-bola ;
Fanaovana fanatitra manome ny rehetra fa tsy ny ampahany ihany.
Mamehy ireo voalaza ireo ny hafatra androany alahady. Didim-pitiavana vaovao izay mitondra antsika amin’ny asa tsara no hafatra ho antsika anio. Ny andinin-tSoratra Masina ao amin’ny Lioka 6 : « 27- 36 » no nanompanana ny hafatra.
Manambara ny toriteny, nataon’i Jesoa tao an-tendrombohitra tany Galilia sy ny Fanjakan’Andriamanitra, iainan’ny mino ety an-tany sahady, ny ao anatin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo. Fampianarana ny mifono ao amin’ny zavatra niainan’i Kristy, araka ny vavaka nampianariny manao hoe : « Ny ety an-tany tahaka ny any an-danitra » no nokendren’i Lioka.
Zavatra telo no kendrena amin’ity hafatra ity :
Jesoa Kristy no sady Andriamanitra no olona (afaka miaina ety an-tany no any an-danitra) nefa koa Mpamonjy izy. Ampifandraisin’i Lioka ny Filazantsaran’ny asa marina sy ny asa soa. Matetika dia mirona amin’ny fifehezan-tena sy filana maro i Lioka raha manoratra.
Jesoa raha nampianatra dia misintona ny saintsika mpianany, isika kristiana (And 27).
Fiainana manokana mihitsy, misaraka amin’ny fanao samihafa efa misy eto amin’izao tontolo izao, no iarahana amin’i Jesoa Kristy. Fihainoana miaraka amin’ny fankatoavana izany no ilaina. Misy didim-pitiavana izay andidian’i Jesoa antsika anio.
Baiko tokana (And 27 -35) « Tiava ny fahavalonareo » : izany dia mifanaraka amin’ny toe-tsaina misy fahafoizan-tena tahaka ny manao sorona ny tena :
Manao soa amin’izay mankahala ny tena (Lev. 19 :17) : mamerina amintsika fa tsy tokony hankahala ny rahalahintsika isika fa mananatra kosa no setriny. Ahazoana heloka ny fankahalana. Mitafy henatra ny mankahala olona, Ny fankalahala dia tsy fiainana.
Fisaorana ho an’izay manenjika antsika kristiana : voarainao ny Fanjakan’Andriamanitra, ary iaino. (Matio 5 :17). Enjehina isika dia fahasambarana izany.
Mila mivavaka ho an’izay manisy ratsy : raha isika kristiana no mamaly faty dia very ny fifaliana mitoetra ao anatintsika sy azontsika. Izy Andriamanitra no manala ny fahoriana ataon’ny hafa amintsika. Tsy misy ny maso solon’ny maso, ary nify solon’ny nify fa dia mivavaka ho azy ireo kosa isika.
Ny teny « Raha » eto dia manambara fa mampiasa fepetra Jesoa : mampifanohitra ny fitiavantsika eo amin’izao tontolo izao.
Ny teny « lamba » sy « akanjonao » : misy heviny lehibe teo amin’ny Jiosy. Ny lamba aminy dia mifono ny vatana na toy ny « sac de couchage », milaza sy manamarika ny maha izy ilay olona.
Ny fomba anehoana fitiavana fahavalo : miresaka fanomezana (and.30) : na izay olona mangalatra ny an’ny tena aza, dia tsy arahina.
Ahoana ary anefa ireto mpangataka eran’ny lalana ?
Baiko eto no arahina. Araka ny fahafahana faratampony no tian’ny Tompo ho tanterahintsika.
Ny and.31dia milaza ny antony anaovana io sy ny tsy ahazoanao ny vokany. Raha mbola mitory ny Filazantsara ny Fiangonana, ary raha mijanona ho kristiana isika, Jesoa nampianatra ny mpianatra amin’izany fombam-piainana izany. Ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe : Ahoana no ahavitana izany marina ? Izaho tsy Jesoa ka manana fahamasinana faratampony, tsy mpitondra fivavahana, ahoana ny fihetsika asehontsika ? Moa handà avy hatrany sa hanaiky amin’ny zato isanjato ?
Raha jerena amin’ny lafiny maha olona irery ihany dia tsy vita izany. Kanefa vita izany raha miaina amin’ny lafiny fahasoavana, amin’ny fitiavana « agape ». Mahafehy ny lalana rehetra ny fitiavan’Andriamanitra, fitiavana manome zato isanjato, hatramin’ny farany, tsy fihetsehampo fa fitiavana manome mandrakariva.
Hafatra ho antsika Fiangonana, mahakasika ny fitiavana ny fahavalo :
Katsaho ny valim-pitia lehibe ho anao (And. 35) :
Tsy izay tiana ihany hotiavina fa izay tsy mendrika hotiavina. Ny mino dia manaraka ny Ray mandrakariva. Ireo ratsy fitondra ny mino no asain’ny Tompo tiaviana.
Tsy izay manao soa ihany no asiana soa. Tsy misy ny fanavakavahana. Asaina manao soa amin’ny olona rehetra, na izay tsy tokony hanaovana soa ihany koa (Mat.5 ; 47)
Alahady natokana ho an’ny Akany Fialofana eny Tangaina, akany mpitaiza zaza kamboty sy maditra. Raha manao soa eny isika dia izy ireo no tsy afaka hamaly soa amintsika. Mampahatsiahy ny soa nataon’i Davida tamin’i Mesoboseta. Nitady ny taranak’i Saoly i Davida, nomeny ny fananany, niray latabatra taminy ihany koa Davida ; namela heloka, santatra nomen’i Jesoa Kristy izany. « Katsaho aloha ny Fanjakan’Andriamanitra dia hanampy anao ny zavatra rehetra », fa katsaho ilay soa, dieny ety an-tany isika dia misitraka izay. Manaova soa mba ho valim-pitia lehibe. Manaova soa tsy misy fepetra.
Katsaho ny maha zanak’Andriamanitra anao : Zanaky ny Avo indrindra isika, kristiana manana finoana isika, zanaka dia manaraka ny Ray. Mpamindra fo ny Ray, dia aoka ho mpamindra fo koa isika. Zanak’Andriamanitra isika. Mila maneho fitiavana amin’ny alalan’ny asa tsara. Ilay fitiavana dia aseho amin’ny asa tsara. Zanak’Andriamanitra isika satria namboarin’Andriamanitra, tsy maintsy miasa tsara. Hijoroantsika vavolombelona, ohatra, ny fitiavana ny namantsika, ny fanatanterahantsika Fiangonana ny Tafika masina, mitaona antsika ho amin’izany ny Tompo.
Fehiny, tsy misy fahavalo hotiavina any an-danitra. Hiaino ary ny Fanjakan’Andriamanitra.
Taorian’ny feon-javamaneno fohy, nanatontosa ny vavaka setrin’ny Tenin’Andriamanitra sy fifonana ny mpitarika. Ary nohiraina ny hira FFPM 444 :1,3 : « Ry raiko feno antra ». Norenesina teo am-pitsanganana ny Teny famelan-keloka.
Niarahana noredonina ny hira FFPM 317 :1,3 : « O ry Rain’ny fahazavana tsy milentika ». Natao ny Fanekempinoana laharana voalohany. Niroso tamin’ny filazana ny raharahan’ny Fiangonana taorian’ny feon-javamaneno fohy.
Ny Mpitantsoratra, Razafimaharo Mamy, no nanao ny tatitra. Ny andinin-tSoratra Masina IKor 3 :17b « Fa masina ny tempolin’Andriamanitra, dia ianareo izany » no nanombohany izany. Toy izao izany :
Alahady natokana hitondrana am-bavaka ny Akany Fialofana eny Tangaina , ny Synodam-paritany
04 septambra : fanokanana trano fiangonana nitarina eny amin’ny FJKM Itaosy
03 septambra : fankalazana ny faha 145 taona FJKM Antsapanimahazo.
Fisaorana noho ny nahavitan’ny Tafika masina Bevoay sy Ambohipiara,
Fisaorana avy amin’ny K160 noho ny fahatontosan’ny « Randonnée » (190 ny mpandray anjara)
04 septambra : lalao ara-panatanjahan-tena manomboka amin’ny 09 maraina
Fanolorana ny zaza Rakotobe Andrianiaiko Heaven
Fivoriana ankatoky ny Fandraisana
Mianatra ny katekomena
Fivoriamben’ ny mpandray Fanasan’ny Tompo amin’ny alahady herin’ny anio.
Nohiraina ny FFPM 3 :3 « Isaorana anie » ary natao ny fanoloran-jaza. Natao ny hira FFPM 788 :1 « Fahiny ianao tonga teto » ary niroso tamin’ny fanatitra.
Ny Biraom-piangonana Andriamasinoro Tantely no namaky ny voady rehefa avy nanolotra ny andinin-tSoratra Masina ao amin’ny Salamo 100 : 4,5 « Midira eo amin’ny vavahadiny amin’ny fisaorana. Ary eo ankianjany amin’ny fiderana. Misaora Azy, mankalaza ny anarany ». Toy izao manaraka izao ny hetahetan’ny mpianakavin’ny finoana nentina teo anivon’ny Fiangonana.
Hira FFPM 107 :1 « Maniry mafy aho »
Hira FFPM 539 : 1 « Faly dia faly »
Taorian’izay, niarahan’ny Fiangonana noredonina ny hira vavaka fanolorana ny fanatitra sy fanavaozana ny fanoloran-tena FFPM 441 :1,3 « Raiso aho Tompo o ! ». Nanao ny anjara hira ny Rantsana Fanantenana sy Fialamboly.
Ny Mpitandrina Ramilison Diamondra no nanatontosa ny vavaka fangataham-pitahiana ho an’ny : Fiangonana, vondrom-bavaka, Akany Fialofana eny Tangaina, tobimpifohazana, Synodam-paritany fahafolo, Fiangonana rehetra ao amin’ny synodam-paritany, tomponandraikitra, Fitandremana Amparibe, sampana sy sampan’asa ary asa, komity velona rehetra, mpianakavin’ny finoana, ; nanana vavaka hataka, fanomanana ny fidiran’ny mpianatra, andraikitra fitaizana ny taranaka, havana namonjy ny fialantsasatra, fitsaboana ireo tsy salama, miatrika ady, kamboty, ary ireo manana vavaka maro samihafa. Nofaranana tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo : « Rainay izay any an-danitra » izany.
Nohiraina ny FFPM 627:1,2 « Vimbino tsara izahay ». Noredonina miaraka ny tondrozotra 2021 narahin’ny tsodrano. Notohizana tamin’ny hira FFPM 351 :1,3 « Tsy hangina re ny hoby noho ianao ry Ziona » ary nofaranana tamin’ny vavaka mangina sy ny Trinité Masina.
Mpitendry orga: Rajaofetra Philippe
Alahady fahefatra, alahady faha XII manaraka ny Trinite
« Ny fivavahana marina dia mifamatotra amin’ny fiainana feno fahamasinana »
Ny fotoam-bavaka natrehin’ny Fiangonana mivantana tao an-tranon’Andriamanitra tamin’ny 9 ora maraina izao taterina eto izao, izay notarihin’ny diakona ao amin’ny Vaomieran’ny Aim-Panahy, Ramahery Yves. Razanamparany Clément, loholona, no nitondra ny Tenin’Andriamanitra. Ny litorjia endriny fahatelo no narahina.
Ny mpitarika ny antoko mpihira Hasin’ny Famonjena Andrianina Ony Miora no nampianatra ny hira fanevan’ny faha-160 taonan’ny Fiangonana « FA MASINA NY TEMPOLIN’ANDRIAMANITRA DIA IANAREO IZANY ». Nisy feon-javamaneno nandritra ny fidiran’ny mpitarika sy ny diakona. Nohirain’ny Fiangonana ny hira faneva.
Ho fiderana an’Andriamanitra sy fanomezam-boninahitra Azy dia niarahana namaky teo am-pitsanganana ny SAL. 97 : 10-12 hoe : « Ianareo izay tia an’i Jehovah, mankahalà ny ratsy ; miaro ny fanahin’ny olony masina Izy ary mamonjy azy amin’ny tanan’ny ratsy fanahy. Ny fahazavana no voafafy ho an’ny marina, ary ny fifaliana ho an’ny mahitsy fo. Mifalia amin’i Jehovah, ry olo-marina, ary miderà ny anarany masina. » Nohiraina ny FFPM 36 « Moa ho haiko tantaraina? » Nisy vavaka fiderana sy feon-javamaneno fohy.
Ny mpampianatra Sekoly Alahady ao amin’ny K7 Randrianarisoa Ravelonandrianina no nitarika izany.
Ny tantara fohy dia miresaka momba ny raiamandreny iray, tany ambanivohitra izay nanana fahitana. Voalaza fa ho avy Jesoa ka niangona daholo ny iray tanàna, nasiana toerana voatokana ho an’i Jesoa mihitsy tao am-piangonana. Nisy saika nipetraka tao amin’ilay toerana fa voasakana. Nifarana ihany ny fotoana fa tsy tonga i Jesoa dia nanontany an’i Jesoa ilay raiamandreny hoe : « Nahoana Ianao no tsy tonga ? » Namaly azy Izy hoe « Efa tonga teo Aho fa nosakananareo, noroahirareo mihitsy aza. Ilay lahiantitra, ilay vaviantitra, ilay zazalahy kely saika nipetraka teo amin’ilay toerana voatokana anefa no nolazainy tamin’izany.
Sanganehana sy diso fanantenana ilay raiamandreny satria tsy nampoizina ilay izy. Ny andinin-tSoratra Masina nindramina nampifandraisina amin’ny hafatra dia : » Lazaiko aminareo marina tokoa: Araka izay efa nataonareo tamin’ny anankiray amin’ireto rahalahiko kely indrindra ireto no nataonareo tamiko » MAT. 25 : 40. Nasaina nitsangana ny fianakaviamben’ny Sekoly Alahady nanao ny FFPM 761 : 2 « Ry Jesoa Zoky be fitia ». Nisy vavaka.
Noredonina avy hatrany ny hira FFPM 482 : 4 « Jehovah ô! Ianao nandinika ahy ». Nivavaka nangataka ny fahafenoan’ny Fanahy Masina ny diakona Randriamasimanana Hanta, avy ao amin’ny Vaomieran’ny Aim-panahy sy namaky ny Testamenta Taloha, raha Rasolonjanahary Fidy no namaky ny Testamenta Vaovao, araka ny perikopa voalahatra ao amin’ny MIK. 6 : 6-8 ; MAR. 12 : 41-44 ; FIL. 1 : 1-11. Nohirain’ny Fiangonana teo am-pitsanganana ny FFPM 470 : 1; 3 « Ny foko, Ry Mpamonjy». Toriteny no nanaraka izany.
Ny MIK. 6 : 6-8 no andinin-tSoratra Masina nanompanana ny hafatra.
Ny fijerin’Andriamanitra dia hafa mihitsy : ny tanjony dia ny hanafaka ny olona fa misy dingana tsy maintsy tanterahina amin’izany. Asa tsara no nandrasan’Andriamanitra tamin’ny zanak’Israely nefa tsy hita taratra izany ka nolavina izy ireo. Andriamanitra dia manome torolalana mandrakariva mba hananan’ny Fiangonana fieritreretana madio, hankahalana ny fahotana, hibebahana, hitoerana amin’ny fahalalana marina.
Nomena lohateny ny toriteny hoe : « NY FIVAVAHANA MARINA DIA MIFAMATOTRA AMIN’NY FIAINANA FENO FAHAMASINANA ». Mizara telo ny fampianarana.
Ny fanekena an’Andriamanitra sy ny fahamasinany
Ny eo amin’ny and.6 dia milaza ny hetahetan’ny vahoaka te hanatona an’Andriamanitra, izay manenina noho ny tsi-fahamendrehany manoloana ny fahamasinan’Andriamanitra. Ny fiantraikan’ny fandikana ny didin’Andriamanitra eo amin’ny fiainantsika dia fanerena ankolaka hanapa-kevitra. Inona no entintsika hanehoana fankasitrahana an’Andriamanitra ? Matetika isika no tsy mety manaiky ny fahadisoantsika fa manamarin-tena. Ny fanekena an’Andriamanitra dia fifantohana tanteraka amin’ny vavaka atao.
Eo amin’ny and.7 no ahitana fa efa fomba fanao teo amin’ny zanak’Israely ny fanatitra dorana noho ny fahatsapany ny heloka nampisaraka azy tamin’Andriamanitra. Niteny ny Tompo hoe : « Na dia manao vavaka be aza ianareo dia tsy hihaino Aho » (ISA. ; EKS. ; HEB.). Tsy nisy nahafapo Azy ny fanatitra. Maimaimpoana sy tsy misy takalony ny fisoloan’i Jesoa ny helotsika. Maro amintsika no manao raki-pisaorana sy mangata-bavaka fa mifanaraka amin’ny sitrapon’Andriamanitra ve ireny ? Izany no tokony hitandremana, na eo aza ny fahafoizana, sao mihevitra hoe ny asa atao dia tontosaina mba tsy hahatezitra an’Andriamanitra. Fifidianana ny andraiki-panompoana raisintsika. Ny fiombonana eo am-panatanterahana ny asa tandrify no ezaka ilaina. Tokony hitandrina isika mba tsy ho tafiditra anatin’ny Fiangonana ny fomban’izao tontolo izao. Ny fisehoana ivelany dia fantatr’Andriamanitra, tsy misy miafina Aminy : tiany ho Azy isika sy hahafoy tena, saina, vatana, fanahy. Ny ezaka ho amin’ny fahamasinana dia fibabohana amin’ny tsi-fahamendrehana eo amin’ny lafim-piainana rehetra.
Ny fivavahana marina dia miala amin’ny fitiavan-tena
Ny fiainana tonga lafatra dia tsy izay mahafinaritra ny tena no atao fa manaraka an’Andriamanitra, mahatoky. Mitaky ny finoana marina izany satria tsy natao hitoetra eto amin’izao tontolo izao ny kristiana. Mila mandini-tena isika, manaiky fa mpanota, miala amin’ny fiheveran-diso, mibebaka hahatongavana amin’ny fahamasinana.
Ny fivavahana marina dia manosika ny mpino hahatanteraka ny asa tsara rehetra
Mametraka mazava ny fitsipi-pitondrantena mendrika i Mika eo amin’ny and.8 : manao izay marina sy mahitsy ; tia famindrampo ; mifampitsimbina ; mahafoy ho an’ny mpiara-belona, manao asa soa ho an’ny malahelo sy tsy miandry valiny ; manetry tena ; manaja ny sitrapon’Andriamanitra ; tsy mieboebo, tsy mihevitra ny tena ho zavatra, tsy miavona. Raha miaina marina izany isika dia handray ny vokatra.
Ampianarina isika haneho firaisan-tsaina, fiombonam-piainana, hihevitra ny asan’i Jesoa teo amin’ny mahantra sy ny very zo, izay tsy ho tanteraka raha tsy amin’ny finoana irery ihany. Ny fampiorenana ny olona amin’ny asa tsara dia amin’ny famantarana ny fadiovampo, mba ho feno ny vokatry ny fahamarinana.
Nisy ny vavaka fifonana notonina sy ny fotoana fohy natokana nivavahan’ny tsirairay mangina. Nohiraina FFPM 415 : 1; 3 « Mifona Aminao izahay ». Natolotry ny mpitarika ny Teny famelan-keloka hoe : « Aza matahotra ianao, fa efa nanavotra anao Aho ; efa niantso ny anaranao Aho, Ahy ianao… Izaho efa nandevona ny fahadisoanao tahaka ny fandevona ny zavona, ary ny fahotanao tahaka ny rahona. Koa miverena Amiko, fa efa nanavotra anao Aho… Izaho avy mba hananany fiainana, sady hananany be dia be… Fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo na ny fikasana na ny fanaovana hahatanteraka ny sitrapony » (ISA. 43 : 1b ; ISA. 44 : 22 ; JAO. 10 : 10b ; FIL. 2 : 13). Nohiraina ny FFPM 543 : 1 ; 3 « Mihoby ny fanahiko ». Notononin’ny Fiangonana ny fanekem-pinoana niarahana tamin’ireo vavolombelona talohantsika (Lah.4). Nisy feon-javamaneno.
Razafimaharo Maminirina, Biraom-piangonana, no namaky izany raharaha izany. Ny andinin-tSoratra Masina nanombohany izany dia ao amin’ny I KOR. 3: 17b. Toy izao ny asa nisongadina tsara fantarina ary hotanterahin’ny Fiangonana sy hoentiny amim-bavaka:
Nambara fa tontosa ny Synoda Lehibe nanavaozana ny Biraon’ny Mpiandraikitra Foibe FJKM hiasa mandritra ny 4 taona ;
Ny mpianakavin’ny finoana manana zanaka mianatra sy mikasa hividy fitaovam-pianarana ao amin’ny Librairie Antso dia afaka maka tapakila ao amin’ny Biraom-piagnonana mba hisitrahana fihenambidy.
Anio no farany fisoratana anarana eo amin’ny tomponandrakitra ao amin’ny komitin’ny fankalazana an’Andriamanitra noho ny faha 160 taonan’ny Fiangonana, eo an-tokotany, amin’ny hetsika « randonnée » karakarain’izy ireo : Ar 2 000 isan’olona no fandraisana anjara amin’izany. Momba ny « tournoi » eny Andohalo kosa dia Ar 1 000 no vola haloa.
Rabenandrasana Andrianina dia mbola nanentana nanamafy ny fampahafantarana voalazan’ny mpilaza vaovao.
Ny sabotsy 28 aogositra 2021, “randonnée” any Alasora Ambohijanaka: hisy lalaom-pifaliana sy sakafo hamidy, samy mitondra ny fitaovam-pihinanany kosa.
Ny sabotsy 4 septambra 2021 dia “tournoi” eo amin’ny kianjan’Andohalo manomboka amin’ny 9 ora maraina. Ireto avy no lalao hatao: foot à 7, basket à 3, pétanque.
Nambarany fa mila mifanotrona sy mifanohana ny Fiangonana, na tsy hilalao aza.
Ranaivoson Jacky, Biraom-piangonana, no namaky ny voady rehefa avy nanolotra ny andinin-tSoratra Masina ao amin’ny SAL. 96: 7-8 izy. Ny hetahetan’ny mpianakavin’ny finoana nentina teo anivon’ny Fiangonana dia fisaorana an’Andriamanitra fa nahazo valim-bavaka sady nangata-bavaka ho famelan-keloka sy hananana fiadanampo ary hitahiana ny ankohonany. Ny hira nangatahiny dia “IANAO NO HERIKO”, an’ny RFF.
Ny hira vavaka fanolorana ny rakitra FFPM 432: 2 « Mandra-piavin’Ny Tompo, mivavaha » no notanterahina teo am-pitsanganana ho fanolorana ny fanatitra sy fanavaozana fanolorantena.
Nihira ny sampana Rindra Fanatanjahantena sy Fialamboly : « VELOMY NY HOBY », izay nitohy tamin’ny vavaka fangataham-pitahiana.
Ny Mpitandrina Ramilison Diamondra no nitarika izany. Ny nangatahina dia ny fiainana ny hafatra avy amin’ny toriteny ka ho mpankato ny Teny ny Fiangonana sy ny fanavaozana ny fanolorantena hanaovana asa tsara. Notononina ireo mpiandraikitra foibe voafidy, indrindra ny Filoha, mba hahomby ; ny Fitandremana sy ny synodamparitany rehetra ; ny toby fifohazana ; ny sekoly FJKM mba hiorina tsara sy tsy hiova amin’ny finoana ; ireo mangata-bavaka ; ny Fiangonan’Amparibe ; ny tompondraikitra sy asa ; ny fanomanana ny hetsika « randonnée » ; ny asa fanamboarana ny trano atsimo ; ny sampana hamonjy fihaonambe na lasy ; ny manao Tafika masina hahavita ny iraka sy ho voaaro sy ho tafody soa aman-tsara. Tsy diso anjara tamin’ny tonombavaka ny marary sy ireo mpitsabo azy ; ny tra-pahoriana hionona ; ny sahirana sy very hevitra ; ny kamboty sy mpitondra tena ho voatahy ; ny isan-tokantrano hanana fiadanana sy fanambinana ; ireo namonjy fialan-tsasatra, ny fiomanana amin’ny fidiran’ny mpianatra ; ny any am-pielezana hitombo fahasoavana ; ny firenena sy ny vahoaka malagasy hiala ny toetsaina miankindoha amin’ny hafa sy hifanampy, ho afaka ny aretina sy fahantrana. Nofaranana tamin’ny « Rainay izay any an-danitra » ny vavaka fangataham-pitahiana.
Nohiraina ny FFPM 753 : 1;2 « Tiako ny miaraka Aminao, Jesoa». Notononina ny tondrozotra 2021. Natolotry ny Mpitandrina ny tsodrano. Ny andininy fahatelo amin’io hira io ihany no natao. Nipetraka ny Fiangonana, notononina ny Trinite. Nifarana tamin’ ny 10 ora sy 32 minitra ny fotoam-bavaka tao anaty feon-javamaneno.
Nitendry: Rajaofetra Philippe & Anthonio, Rabiazamaholy Mahery, Raharinoa Fenitra Andriamamdimbiharisoa ;
Fafana: Razafimaharo Kanto
Fanamafisam-peo: Randriamahefa Tianarivony
Naka sary: Rakotondramboa AndryNandray an-tsoratra: Ralaiarimanana Narindra
Alahady 08 Aogositra 2021
Alahady 01 Aogositra 2021